Precision Machining Izingxenye, CNC Izingxenye, Precision Finishing Izingxenye - Wasser
Ifoni: + 86-18067150087
ukukhiqizwa Professional machining esihle futhi lathe maching ukucubungula zonke izinhlobo izinto, kuhlanganise Aluminium, Brass, Iron njll; CNC ukucacisa izingxenye kusebenziswe futhi ukukhiqiza.
Wasser Tek LIMITED ukuthi establised at 2007 okuyinto sise Yuhang Dist. Hangzhou edolobheni njengoba ipharadesi eyaziwa yasemhlabeni. Sizinikele ukuhlinzeka imikhiqizo ephakeme, ukwesekwa ubuchwepheshe kanye eyanele ngemuva-ukudayiswa service. imikhiqizo Main: machining esihle futhi lathe maching ukucubungula zonke izinhlobo izinto, kuhlanganise Aluminium, Brass, Iron njll; CNC ukucacisa izingxenye kusebenziswe futhi ukukhiqiza.
Le nkampani ine imishini eziphambili ukukhiqizwa, professional izisebenzi lobuchwepheshe kanye esiqinile ukuphathwa izinga uhlelo, ngokuvumelana nesimiso ukuphathwa okuhle kokukholwa, high kanye omuhle intengo isimiso ukunikeza amakhasimende ne isevisi ephelele. Sakhele amakhasimende kuwumgomo thina Ngazixosha njalo. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi kuphela nongenza iyona isiqondiso ukuthuthukiswa ibhizinisi. Sizokwenza njengoba njalo, ukukhiqiza imikhiqizo eyikhwalithi ezinhle ngokuhambisana ngokuqinile nezidingo zamakhasimende ethu ukuze ubuyisele ukwesekwa kanye nokwethenjwa ngamakhasimende ethu.
Rich nakho lobuchwepheshe
ukukhiqizwa umthamo eqinile of izinto zokusetshenziswa, nge ekuqongeleleni eside nakho lobuchwepheshe, ukuphishekela ubuhle ngekhwalithi, ukunikeza amakhasimende ne imikhiqizo kanye nezinsizakalo.
ukukhiqizwa Professional nokucutshungulwa aluminium, bethusi, bensimbi kanye nezinye izinto ukucubungula, CNC yokuqedela ukucutshungulwa, amakhasimende amaningi bayakwazisa nokubonwa.
Ingabe Ngisho angeziwe
Ukunikeza Quality Products, Service Excellent, Amanani Competitive kanye Delivery Yazisa. Imikhiqizo yethu athengisa kahle kokubili emamakethe ezifuywayo angaphandle. Inkampani yethu uzama ukuba ngomunye abahlinzeki ezibalulekile e-China.
Yakha Isikhunta lakho Machine
Sibheke phambili ukuzwa kuwe, ngabe ikhasimende abuyele noma entsha. Sithemba uzothola ukuthi ufuna lapha, uma kungenjalo, sicela uxhumane nathi ngokushesha. Siyaziqhenya phezulu inkonzo notch amakhasimende kanye impendulo. Siyabonga ibhizinisi lakho kanye nokwesekwa wena!
Amadivayisi: Yuhang Dist, Hangzhou idolobha
Umhlahlandlela - Okufakiwe Products - Ibalazwe - Imigomo Ucingo
CNC Machining Izingxenye , Precision Icubungula Izingxenye , Precise Machining Parts, Machining Parts, Precision Heat Ukwelashwa Process Izingxenye , CNC ngomshini Izingxenye ,